Aniga oo ah (gabar, 17 jir ah) shalay ayaan cabay khamro. Kadibna wiil saaxiib ah ayaa iga taabtay naasaha, kadibna lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonayo in uu i taabto. Laakiin waxba ma dhici karo maadaama ay igu adagtahay in aan arintaasi ka hadlo. Saaxiibadayda gabdhaha ahi waxay dhahaan: midaasi waa waxa kugu dhaca marka aad cabtid khamro. Khalad miyaan ku leeyahay arintaasi? – Tips for refugees
Aniga oo ah (gabar, 17 jir ah) shalay ayaan cabay khamro. Kadibna wiil saaxiib ah ayaa iga taabtay naasaha, kadibna lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonayo in uu i taabto. Laakiin waxba ma dhici karo maadaama ay igu adagtahay in aan arintaasi ka hadlo. Saaxiibadayda gabdhaha ahi waxay dhahaan: midaasi waa waxa kugu dhaca marka aad cabtid khamro. Khalad miyaan ku leeyahay arintaasi?
Anagu waxaynu leenahay: gebi ahaanba maya!
Qofna ma ahan in nafsadiisa lagu eedeeyo marka wax sidaan oo kale ah lagu sameeyo.
Qofna ma ahan in uu ku taabto haddii aadan sidaasi doonaynin.
Mararka qaar waxaa jirta wakhtiyo qaab daran.
Xitaa qof aad garanaysid!
Mararka qaarna waa habbeen wanaagsan in lagu bilaabo.
Laakiin kadibna waxaa kugu dhacaya waxyaabo aadan doonaynin in ay kugu dhacaan.
Laakiin arinta ay tahay in aad marwalba oggaatid waxay tahay in dareemahaagu ay yihiin kuwo sax ah oona muhiim ah!
Xitaa sharcigu wuxuu dhigayaa:
In la shumiyo, la taabto oona galmo lala sameeyo lammaane aan midaasi oggolaanin waa arin mamnuuc ah.
Xitaa haddii aadan adigu awoodin in aad nafsadaada u hadashid markaasi.
Xitaa haddii aad si aad ah u cabsantahay oona awoodin in aad dhahdid maya.
Qofka kale weli waa in uu oggaado haddii aad si dhab ah u doonaysid in aad ku raaxaysanaysid waxa uu samaynayo ama aadan doonaynin.
Adiga waxaad awoodaa in aad marwalba raadisid caawimaad.
Tusaale ahaan, magalaada Munich waxaynu ku leenahay xarun tallo IMMA ah: http://www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle/kontakt.html
Dhallinyaradu waxay caawimaad ka heli karaan meel kale oo Jarmal ah sida meeshan oo kale: https://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung
Previous Previous post: Goor dhowayd waxaan joogay xaflad (Waxaan ahay gabar, 16 sanno jir ah) kadibna ‘waan suuxay’. Ma garanayo waxa dhacay. Laakiin ma aanan cabaynin khamro mana qaadanin wax daroogo ah. Maxay sidaan u dhacday?
Next Next post: Aniga oo ah (gabar, 15 sanno jir ah) waxaan jeclahay in aan aado Oktoberfest ee ku taala Munich sannadkan. Anigu weligayga meesha ma tagin! Maxaan u baahanahay in aan oggaado?